कै’दी ब’न्दीको कारागारमै यसरी रमाउदै टीका र जमरा !! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/कै’दी ब’न्दीको कारागारमै यसरी रमाउदै टीका र जमरा !!
कै’दी ब’न्दीको कारागारमै यसरी रमाउदै टीका र जमरा !!
लमजुङ । लमजुङको बेँसीशहर स्थित जिल्ला का’रागारका कै’दीब’न्दीले को’रोनाको त्रा’सका बीच का’रागारमै टीका लगाएर दशैँ मनाएका छन। आज विजयदशमीका दिन का’रागारमा रहेका सबैभन्दा बढी उमेरका कै’दी ६५ वर्षीय रेखबहादुर थापा क्षेत्रीको हातबाट सबै कै’दीब’न्दीले साइतमै टीका लगाएका थिए ।
को’रोना त्रा’सका कारण का’रागारमा विगतमा जस्तो आफन्तहरुलाई टीका लगाउन आउन नदिइएको का’रागारका जेलर्स विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए। विसं. २०२८ मा स्थापित सो का’रागारमा हाल ८१ जना कै’दीबन्दी छन। यी मध्ये ७५ पुरुष र ६ महिला छन।
मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका र समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर दशै मनाइदै छ । को’रोना सं’क्र’मणका कारण यस पालिको दशैमा खासै रौकन देखिएन । विधिको लागि मात्र भए पनि दशैं मना उनु पर्ने बा’ध्यता अनुसार दशै मनाइएको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले टीका लगाएको तस्बिर राखेर विजया दशमीको शुभ कामना दिएका छन् । उनले आज आफू सहित नेपाल स्थित अमेरिकी मिशनको तर्फबाट शुभकामना दिएका हुन् ।
बेरीले नेपाली टोपी र रातो टीका लगाएको तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेका छन् । तस्बिरमा सबैजना नेपाली स्थानीय पोशाकमा देखिन्छन्। उनले शुभकामनामा भनेका छन्ः २०७७ सालको विजया दशमीको उपलक्ष्यमा म लगायत नेपालस्थित अमेरिकी मिशनको तर्फ बाट यो चाड मनाइरहनुभएका सबैमा सुख, स्वास्थ्य, तथा समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले टीका लगाएको तस्बिर राखेर विजया दशमीको शुभकामना दिएका छन। उनले आज आफूसहित नेपालस्थित अमेरिकी मिशनको तर्फबाट शुभकामना दिएका हुन। बेरीले नेपाली टोपी र रातो टीका लगाएको तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेका छन् । तस्बिरमा सबैजना नेपाली स्थानीय पोशाकमा देखिन्छन् ।
त्यस्तै,बलिउड अभिनेत्री करीना कपुर खानले सैफअलीका पुर्व पत्नि अमृता सिंहसंग जीवनमा कहिल्यै पनि भेट नभएको बताएकी छन् । उनले सो कुरा बलिउडका निर्देशक तथा निर्माता करण जौहरको कार्यक्रम ‘कफी विथ करण ६’ मा बताएकी हुन् ।
कसरी लिग भयो अरबकाे जहाँ नेपाली चेली हरु यस्ताे का*म गर्दै..…..भि/डियो हेर्नुहोस।
सुहा,गरात को भिडियो यसरी लिक भए पछि श्रीमान श्रीमती लाई तनाब हेर्नुहोस यो भिडियो